Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || कोरोनालाई पत्र – kayakairan.com
९ चैत्र २०७६, आईतवार १७:२७
४२ डिग्रीको तातो माया तिमीलाई !
“प्रिय कोरोना” सायद सम्बोधन नै गलत गरे जस्तो लाग्छ । पछिल्लो केही समय देखि हर रात, हर समय तिम्रै यादमा यसरी हराएको छु कि जसले गर्दा पनि प्रिय नै सम्बोधन गरेँ । बुझ है ! यो मायाको सम्बोधन तिमीलाई बिदाइ हुन दिएको छु नि । स्वागत गर्नलाई होइन ।
थाहा छ तिमीलाई ? तिमी अहिले नेपालमा मात्र होइन विश्वका हरेक कुनाकुनामा चर्चित भएका छौ । सोच तिमी सेलिब्रेटी भैसकेका छौ । न त तिमीलाई कहिल्यै भेटेको, न त बोलेको नै ! तै पनि किन यति धेरै याद आएको होला ? अचम्म लाग्छ । तिम्र्रो रुपलाई भने धेरैको दिमागले कहिल्यै बिर्सिन नसक्ने गरी एउटा छुट्टै आकार बनाइदिएको छ ।
कहाँबाट आयौ यसरी सबैको मन मुटुमा बस्ने गरी । सबै देशहरुमा भ्रमण गरिरहेको तिमीले नेपालमा पनि पक्कै ग¥छ्यौ होला है ! बेलाबेलामा यहाँका स्रोत साधनलाई हेर्दा त यस्तो लाग्छ तिमी आइसकेकी छ्यौ होला । बिन्ति आइहालेको भए पनि जाउ है फर्केर । यहाँ तिमीले माया गरेको मान्छेलाई सुम्सुम्याउन सक्ने मुटुभएका डाक्टरहरु पनि आफै असुरक्षित हुनुहुन्छ । तिमी यस्तो अवस्थामा आएका छौ कि तिमीलाई कुनै पनि तरिकाले स्वागत गर्न सक्ने हिम्मत बटुल्नै सकेका छैनौ ।
एउटा कुरा थाहा छ तिमीलाई ? पल्लाघरे रामलाल, आमा बाबासँग झगडा गरेर घर नगएको ८ वर्ष भएको थियो । सुनेको थिएँ आज घर फर्किदै छन् रे । तिमीले धेरै परिवारलाई केही समय भएपनि सँगै बस्ने वातावरण मिलाइदिएका छौ तर कोहीसँग भेट्न नआउनु है ! बिन्ति छ । सुनेको छु तिमी त नेटवर्क भन्दा पनि फास्ट छ्यौ रे । तिमीले माया गरेको मान्छेको हात, ऊ बसेको ठाउँ जताततै तिमी घुमिरहन्छौ रे । कस्तो सुन्दा पनि मन नै भक्कानिने ।
हिजो राजनले मलाई १००० रुपैया दिएको थियो । त्यो मैले पर्समा राखेँ । साझ दिनेसलाई दिएँ । दिनेसले तरकारी पसलमा दिएका रैछन् । तरकारी पसलले सहकारीमा जम्मा गरिदिएछन् । आज यसो सोचेँ, राजनको साथमा तिमी भएको भए ? त्यही पैसा मार्फत म, दिनेस, तरकारी पसलले, सहकारीमा कलेक्सन गर्ने ती बहिनी हुँदै फेरि कसको हातमा पुग्थ्यौ होला तिमी । त्यसैले आजबाटै मैले मात्र होइन सबै साथीहरुलाई पनि ब्यागमै सेनेटाइजर बोकेर हिँड्न भनेको छु । जसले तिमी हाम्रो हातमा आयौ भने पनि त्यसैले तिमीलाई हामीबाट छुटाउन सक्छौ । किनकि हामी टाढिन चाहान्छौ ।
अवस्था यस्तो भैसक्यो कि तिमीलाई नसुनेको मान्छे यो विश्वमा सायद कमै होलान् । सरकारले पनि तिमीलाई आउन नदिनको लागि सबैतिर बन्द गर्र्दै छ । तिमी आउनलाई बाटो जति सुकै फराकिलो किन नहोस् अहिले नआउ न तिमी । यसै त अस्तब्यस्त भएका छौ हामी त्यसैमा तिमी आएर दौडिन थाल्यौ भने । हे प्रभू !
यो धर्तीमा नआउनु थियो आइसक्यौ । भयो अब तिमी फर्किनु । हामीलाई कत्ति पनि भेट्न मन छैन । तिमीलाई कोसेली ४२ डिग्रीको गर्मी दिएर पठाउन मन लागेको थियो. तर किनकिन झन् यही बेला पानी बेला बखतमा दर्किन खोज्छ । अहिले हामी भेट्ने मुडमा छैनौ । हामीलाई यत्तिकै छाडिदेऊ । हामीलाई सधै आफ्नो घर परिवारसँग मिलेर हासीखुसी बस्न देऊ । बिन्ति हामी कोही पनि तिमीसँग नजिकिन चाहदैनौँ ।
उही तिमी बिना.मज्जाले रमाउन सक्ने